MMC သွေးအလှူရှင် အသင်း (ရန်ကုန်မြို့နယ်) - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
All Groupsသင်၏အဖွဲ့ များ MMC သွေးအလှူရှင် အသင်း (ရန်ကုန်မြို့နယ်)
မင်းသခင် မှ တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်
မိမိတို့သွေး ဖြင့် လူတွေအသက်ကိုကယ်လိုက်ကြရအောင်နော်.......
သွေးအလှူရှင်အသင်းကို (၂၄.၈.၂၀၁၁) တွင် စတင်တည်ထောင်ထားသည်...သွေးများလိုအပ်ပါက MMC သွေးအလှူရှင်အသင်း သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်...မင်းသခင် (၀၉၇၃၁၆၈၈၃၆) သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်.......။ မိမိတို့ ဆက်သွယ်ရမည့်( နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၊ မိမိတို့သွေးအုပ်စု) မှန်ကန်စွာကို ဖော်ပြ ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ.... သွေးလှူမယ်လို့စိတ်ကူးရှိရင်တော့ မြန်မာချစ်သူများဆိုဒ် တာဝန်ရှိသူ မင်းသခင် အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ....ကျွန်တော်တို့ သွေးလှူရှင်အသင်း မှ (၆) လ တစ်ခါ သွေးများ ကို သွားရောက်လှူတန်းမည်ဖြစ်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.........သွေးလှူရှင်များ ကို စတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်........ MMC သွေးအလှူရှင် အသင်း စည်းကမ်းချက်များ (၇)ချက် ၁။ အသင်းသူ ၊ အသင်းသားများအားလုံးမိမိတို့အသင်းအားတန်ဖိုးထားရမည်။ ၂။ အသင်းသူ ၊အသင်းသားများ အားလုံးစည်းလုံးမှူရှိရမည်၊ ၃။ အသင်းတိုးတက်ရန်ဆွေးနွေးမည် ဆိုပါက ၊ မပျက်မကွက် တက်ရောက်ပေးကြရန်။ ၄။ ရာထူးကြီးသူများသည်မိမိ အောက်ရှိအသင်းဝင်များအပေါ်နှိမ့်ချပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း မပြုရန်၊မိသားစုစိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာ ဆက်ဆံကြရန်။ ၅။ တွေ့ဆုံမည့်နေရာသို့မလာရောက်နိုင်ပါကတာဝန်ရှိသူ မင်းသခင်အားကြိုတင်အကြောင်းကြားရမည်။ ၆။ မိမိတို့အသင်းအား ပျော်စေပျက်စေ သဘောမထားကြရန်။ ၇။ ဆိုဒ်အတွင်းရှိ သွေးအလှူရှင်အဖွဲ့အား(၃)ရက်တစ်ခါ ၀င်ရောက်ပေးရန်နှင့် ကြေငြာစာများအား ကြည့်ရှုရန်။ ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့်မြန်မာချစ်သူမိသားစုသွေးအလှူရှင်အသင်းမင်းသခင် (Administrator)ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ် (၀၉၇၃၁၆၈၈၃၆)မေး----minthakhin@mmcfamily.orgဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာwww.mmcfamily.orgMMC သွေးအလှူရှင်အသင်းအုပ်ချုပ်သူများ အမည် တာဝန်များ(၁) မင်းသခင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(၂) လှိုင်ဝင်းကျော် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး(၃) မြတ်သူ တာဝန်ခံ(၄)အောင်သီဟသိန်း တာဝန်ခံတာဝန်ရှိသူများကိုဆက်လက်တင်ပြသွားမည်။ ဆွေးနွေးချက်များ
MMC သွေးအလှူရှင်အသင်းဝင်ကဒ်လုပ်ရန် စရင်းပေးသွင်းရန်နေရာ
Started by မင်းသခင်. Last reply by Yeဲ Min Thu Apr 25. သွေးအလှူရှင် မှ အုပ်ချုပ်သူများ ဆွေးနွေးရန်နေရာ
Started by မင်းသခင်. Last reply by naingtunlinn Jun 6, 2012. MMC သွေးအလှူရှင်အသင်း ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲပြုလုပ်မည့်နေရာ
Started by မင်းသခင်. Last reply by mr.hurricane2010 Jan 27, 2012. MMC သွေးအလှူရှင်အသင်း မှ မန်ဘာများ
Started by မင်းသခင်. Last reply by ချောချောကံ့ကော်ခိုင် Jan 15, 2012. သွေးအလှူရှင်များ စာရင်းပေးသွင်းရန်နေရာ
Started by မင်းသခင်. Last reply by mr.hurricane2010 Nov 30, 2011. MMC သွေးအလှူရှင်အသင်းဝင်များသိရှိစေရန်နှင့်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်
Started by မင်းသခင်. Last reply by ရို့မန် (ကြယ်မင်းသားလေး) Oct 19, 2011. MMC သွေးအလှူရှင်အသင်း လုပ်ဆောင်မည့် နည်းလမ်းတစ်ချို့
Started by မင်းသခင်. Last reply by ရို့မန် (ကြယ်မင်းသားလေး) Oct 19, 2011. အကြံပြုရန်နေရာ
Started by မင်းသခင် Oct 18, 2011. အားလုံးကြည်ရန်
You need to beamember of MMC သွေးအလှူရှင် အသင်း (ရန်ကုန်မြို့နယ်) to add comments!
Comment by လေ၇ာင်လင်း on July 6, 2012 at 11:53am ကျေးဇူးပါ။http://www.bkserv.net/images/Smile.gif Comment by လေ၇ာင်လင်း on July 6, 2012 at 11:52am ကျေးဇူးပါ။http://www.bkserv.net/images/Smile.gif Comment by sawthitsar63 on April 11, 2012 at 11:54am ကျွန်တော်က မော်လမြိုင်ကပါ။ သွေးလှူးရှင်တစ်ဦးပါ။ သွေးလှူးရှင်အသင်းဖွဲံပေးလိုကျေးဇူးတင်တယ်။ Comment by Kyaw Nanda on January 3, 2012 at 1:59pm ကိုမင်းသခင်
ကျွန်တော်က Nanda Kyaw ပါ
သွေးလှုရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် သွေးလှုဖို. ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ရမလဲ သိပါရစေ Comment by မင်းသခင် on December 31, 2011 at 11:38pm ကျွန်တော်တို့သွေးအလှူရှင် ကလှူချင် ပါတယ် အကိုကဘယ်သူပါလဲခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ က အမှတ်၂ မှာ လုပ်ဖို့ ပြောပြီးလို့ အဲ့မှာမလှူတော့တာပါခင်ဗျာ ကျေးဇူးပါ
Comment by Kyaw Nanda on December 30, 2011 at 10:47am ကျွန်တော်တို့ သွေးလှုရှင် အသင်းအနေနဲ့ ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက်မီးဘေးတွင် ဒဏ်ရာရရှိပြီး သွေးလိုအပ်နေသူများအတွက်လှုဒါန်းရန် စီစဉ်ပေးကြစေလိုပါတယ်။
Comment by lwinmomohtet on December 20, 2011 at 8:09pm :)ဟုတ် ..တင်သွားပါတယ် .. Comment by မင်းသခင် on December 20, 2011 at 11:00am သွေးအလှူရှင်အသင်း မှာ မော်လမြိုင်က တစ်ယောက် ကျွန်တော့် ကို မေးလေးတစ်ချက်လောက် ဒီမှာ လာတင်ပေးထားပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Comment by မင်းသခင် on December 15, 2011 at 10:37pm အားလုံးပဲခင်ဗျာ သွေးအလှူရှင် အသင်း တွင် ၀င်ရောက် ပြီး သွေးမလှူချင်ပဲ ပျော်စေပျက်စေ၀င်ရောက်သူများ ဒီအဖွဲ့မှပြန်လည်ထွက်ခွာပေးပါရန် တောင်းဆိုပါတယ် ခင် ဗျာ သူငယ်ချင်းတို့ ကိုယ်တိုင်မထွက်ပါက ကျွန်တော် ကိုတိုင်ထုတ်ပယ်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းသတိပေး
မင်းသခင် သွေးအလှူရှင် အသင်း Comment by soeha on December 11, 2011 at 2:41am i like the group because the very looking the world and human so.So my group you should the going the meeting. '' THANK YOU ALL MY GROUP AND FRIEND''...... ‹ နောက်သို့
မြန်မာချစ်သူ မိသားစု သွေးလှူရှင်အသင်း၏ ပထမအကြိမ်မြောက် လူနာရှင်ထံသို့ သွေးလှူဒါန်းခြင်း ပြီးမြောက်ကြောင်း ကြေညာချက်
11. ★♥♪✞ထာဝရ✞♪♥ ★